Xarunta Warbaahinta - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Media Center
Moobayl / Qoraal: 360-704-9489
Blog Cusboonaysiinta Agaasimaha
Warbixinnada Ganacsiga iyo Daabacadaha
Diiwaanka Qolka Wararka
Soo gal kaydkeena adoo tagaya bartayada bogga sii deynta warka oo buuxa.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan helitaanka war-saxaafadeed, la-talin, sawir, op-ed, ogeysiin ama waxyaabo kale oo laga soo saaray warbaahinta wararka kahor 2016, fadlan la xiriir Penny Thomas, Maareeyaha Xiriirka Warbaahinta Ganacsiga, (206) 256-6106.
Iyada oo sahayda biyaha dhulka hoostiisa ay aad u liidato, bulshooyinka Basin Columbia waxay si wada jir ah u abaabulaan si ay u ilaaliyaan…
Kooxaha kala duwan waxay u midoobaan inay u doodaan kheyraadka biyaha waara ee bulshooyinka badhtamaha Columbia u baahan yihiin si ay u noolaadaan.
Oct 20, 2021 / Read More
Dayaxa Sinaanta Dijital ah: Gobolku wuxuu daahfurayaa Xafiiska Sinnaanta Dijital ah si uu u caawiyo dhammaan Washington…
Waxaad u badan tahay inaad tan ku akhrinayso aalad ku xiran internetka. Tixgeli naftaada nasiibka waayo 45% dadka deggan Washington midkood…